स्तनपान गराउने आमाले के खाने ? – Mission
स्तनपान गराउने आमाले के खाने ?
नानी रोयो, भोक लाग्यो होला, खुवाइहाल ।
नानीलाई नखुवाएको धेरै बेर भयो, छिटो दूध खुवाउनुजस्ता भनाइ हामीले प्रायः सुन्ने गरेका छौं । तर नानीलाई दूध खुवाउनुपर्ने भएकाले पोषिलो खाना समयमा खानू, आराम गर्नु भन्ने कुरा भने शायद विरलै सुन्छौं । हो, बच्चाले भन्न जान्दैन र उसलाई समय–समया आमाको दूध खुवाउनुपर्छ । सुरुमा पाएको पोषिलो आहारले उसको भावी जीवनलाई प्रभाव पार्छ ।
विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त, सर्वगुण सम्पन्न आमाको दूधको स्रोत अर्थात आमाको पोषण, स्वास्थ्यस्तर, उनले दैनिक प्राप्त गर्ने खानाको स्तरबारे भने तुलनात्मकरुपमा कम मात्र चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । अझ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने स्तनपानलाई पौष्टिक र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भन्दा पनि परम्परागत मान्यताको रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । स्तनपानलाई प्राथमिकता दिदाँ शिशुले यथेष्ट पौष्टिक तत्व प्राप्त गर्ने मौका पाउँछ तर आमाको खानाको खानामा उचित ध्यान पु¥याउन नसकेमा उनको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ । प्रायजसो सुत्केरी महिलामा लौहतत्व, भिटामिन ए, प्रोटिन कमी हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २६, २०७२ 1:34:52 PM |
Prevडोनाल्ड ट्रम्पको भाषणप्रति विभिन्न मुलुकको आपत्ति
Nextजीयालाई भूवनले किन दिए यति ठूलो स्थान ?